Iqela labahleli beThermorecetas-Ukupheka ngeThermomix | ThermoRecipes
Thermorecetas ngu ibhlog ekhokelayo malunga neendlela zokupheka ezenziwe ngeThermomix eSpain kwaye yenye yezona zinto zibalulekileyo kwinqanaba lekhitshi ngokubanzi. Yindawo yentlanganiso yemihla ngemihla yabo bonke abathandi bokupheka ngokubanzi kwaye ngakumbi abo basebenzisa iThermomix.
Lewebhu yaqala ngo-2010 Ukusukela ngoko yonke imihla sipapasha enye (okanye ezininzi) iiresiphi zentsusa ukuze wonke umntu enze ekhitshini lakhe. Sineendlela zokupheka zazo zonke iintlobo, zazo zonke izinto esizithandayo kunye nezilungelelanisiweyo kuwo onke amanqanaba, ukusuka kumalungiselelo anzima kakhulu ukuya kokulula angenziwa kwimizuzu engaphantsi kwe-30 kunye nolwazi olusisiseko lokupheka.
Kwakhona Sisungule iincwadi ezininzi njengoko ubona kweli candelo. Okwangoku sinawo Iincwadi ezi-2 zipapashwe no-Anaya ezithengisa kakhulu kwaye sikhuphe iincwadi ezininzi kwifomathi yedijithali efana nencwadi ka Veza iiresiphi zokwenza ngaphantsi kwemizuzu engama-30. Sikwasebenzisene ne-NGO ukwenza incwadi yobumbano ukunceda ukondla abo baswele kakhulu.
Ukuba ufuna ukubona zonke iiresiphi, ngoku ungayenza ngokungena kwicandelo iiresiphi ezi-odolwe kakhulu okanye kwifayile ye- iiresiphi ziyalelwe ngumxholo. Unokubona ezinye izihloko esijongana nazo kwiwebhu enkosi icandelo lethu lecandelo.
Zonke iiresiphi ezivela kwiThermorecetas zilungisiwe ngabapheki bethu. Ngumphefumlo wale webhusayithi kwaye babonisa amandla kunye namava njengabapheki kwisitya ngasinye abasenzayo. Kweli candelo Sikwazisa kulo lonke iqela lethu lokuhlela ukuze wazi kwaye uziva kule webhusayithi ekhaya. Kwakhona, ukuba ufuna ukujoyina ngoku ungayenza ukugcwalisa le fomu Kwaye xa sigqibile siya kuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza.
Igama lam ndingu-Irene, ndazalelwa eMadrid kwaye ndinesidanga kuGuqulelo noToliko (nangona namhlanje ndisebenza kwilizwe lentsebenziswano yamanye amazwe). Okwangoku, ndingumququzeleli weThermorecetas.com, ibhlog endikhe ndasebenzisana nayo iminyaka eliqela (nangona ndandingumlandeli othembekileyo kwakudala). Apha ndifumene indawo entle eye yandivumela ukuba ndidibane nabantu abakhulu kwaye ndifunde iindlela ezininzi zokupheka kunye namaqhinga. Umnqweno wam wokupheka uvela ndisemncinci xa ndincedisa umama ekuphekeni. Endlwini yam, izitya ezivela kwihlabathi liphela bezisoloko zilungiswa, kwaye oku, kunye nothando lwam olukhulu lokuhamba ngokungaqhelekanga kunye nayo yonke into enxulumene nelizwe lokupheka, ndiyenzile namhlanje yenye yezinto endizithandayo. Ngapha koko, ndaqala kwilizwe lokubhloga kwiminyaka embalwa eyadlulayo ngebhlog yam yokupheka iSabor Impression (www.saborimpresion.blogspot.com). Emva kwexesha ndadibana neThermomix, kwaye ndayazi ukuba iya kuba ngumlingane wam omkhulu ekhitshini. Namhlanje andinakucinga ukupheka ngaphandle kwayo.
Igama lam ndingu-Ascen kwaye ndinesidanga kwezentengiso kunye nobudlelwane boluntu. Ndiyathanda ukupheka, ukufota kwaye ndonwabele abantwana bam abane abancinci. NgoDisemba ka-2011 mna nosapho lwam safudukela eParma (e-Itali). Apha ndiyaqhubeka nokwenza izitya zaseSpain kodwa ndikwalungiselela ukutya okuqhelekileyo okuvela kweli lizwe, ngakumbi ukusuka kwingingqi yeParma - amaParmesan aqhayisa ngokuba "yintlambo yokutya" kunye nokuzalwa kwe-gastronomic yase-Italiya ... -. Ndiza kuzama ukuhambisa le nkcubeko yokupheka kuwe, ewe, rhoqo ngeThermomix yethu okanye ngeBimby, njengoko amaTaliyane esitsho.
UMayra Fernandez Joglar
Ndazalelwa e-Asturias ngo-1976. Ndafunda i-Technical Business and Tourist Act e-Coruña kwaye ngoku ndisebenza njengempimpi yabakhenkethi kwiphondo laseValencia. Ndingummi omncinci wehlabathi kwaye ndiphethe iifoto, izikhumbuzo kunye neendlela zokupheka ezivela apha naphaya kwityesi yam. Ndingowosapho apho amaxesha amnandi, amnandi namabi, ethe tyaba etafileni, ke kuba oko ndandisemncinci ikhitshi lalikho ebomini bam. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo ukuthanda kwam kwanda ngokufika kweThermomix endlwini yam. Emva koko kwavela ibhlog yeLa Cuchara Caprichosa (http://www.lacucharacaprichosa.com). Olunye uthando lwam olukhulu nokuba ndinokulahlwa okuncinci. Ngoku ndiyinxalenye yeqela elimangalisayo eThermorecetas, apho ndisebenza khona njengomhleli. Yintoni enye endinokuyinqwenela ukuba ukuthanda kwam kuyinxalenye yobizo lwam kunye nobizo lwam lokuthanda kwam?
Ndiqale ngomdla wam onomdla wokubhaka ndisemncinci kwi-16, kwaye ukusukela ngoko andikayeki ukufunda, ukuphanda kunye nokufunda. Kwakungumceli mngeni kum ukuba ndizinikele ngokupheleleyo kuwo kunye nokufumanisa okwenyani ukuba ndibe neThermomix ekhitshini lam. Kukhululeke ngakumbi ukwenza ukutya okuyinyani kwaye kwandise ulwazi lwam malunga nokupheka, umceli mngeni kum kwaye ndiqhubeke nokufundisa iindlela zokupheka ezilula kunye nezobuchule.
Ndiyakuthanda ukupheka. Kwaye ubhale. Ke yintoni engcono kunebhlog yokupheka? I-Thermorecetas idibanisa umsebenzi wam kunye nothando lwam. Kungenxa yoko le nto ndisabelana nawe ngezona ndlela zam zokupheka zintle, zenziwe ngezithako eziyimfuneko, kwaye nangomdla wokukwenza uzithande.
Igama lam ndinguSilvia Benito kwaye kunye no-Elena ndiqale le bhlog ngo-2010. Ukupheka kwaye ngakumbi iThermomix luthando lwam olukhulu kwaye luyabonisa. Ndikhule kancinci kancinci, ndifunda ngendlela yokuzifundisa; okukhethekileyo yiidessert .... yum yum yum.
Igama lam ndingu-Elena kwaye enye yezinto endizithandayo kukupheka, kodwa ngakumbi ukubhaka. Ukusukela oko ndine-Thermomix, olu thando lukhulile kwaye lo matshini mhle uye waba yinto ebalulekileyo ekhitshini lam.
UKUSEKELWA KWI-GLASS! Kwiminyaka eliqela eyadlulayo ndaqala ukuba nomdla kwihlabathi lesisu kunye nendlela eyakhula ngayo ekhitshini ngalinye. Mna, ovule iikhonteyina kuphela ukufaka i-microwave eyenza isiseko sokutya kwam. Enkosi kwibhlog eyaziwayo, ndiqale ukusebenzisa ikhitshi ngaphezulu kokuvula nje ifriji kwaye ndibambe nantoni na. Emva kweminyaka embalwa ndisebenza ndedwa, ngaphandle kwento yokusebenza yasekhaya ngamanye amaxesha, ndiye ndafumana irobhothi eyaziwayo ekhitshini endiphuhlisa ngayo iiresiphi ezininzi endiziveza kwisitishi kwaye nokusetyenziswa kwazo kundothusa yonke imihla. Kakhulu kangangokuba andifuni ukuyeka ukwabelana ngayo. WAMKELEKILE! Nangona ndikuthanda ukupheka ngokubanzi, kangangeminyaka ndiye ndenza utshintsho kwindlela enditya ngayo ngenxa yesiqalo sendlela yokuphila esekwe kwezemidlalo kunye nokuba sempilweni. Uninzi lweeresiphi endiziphuhlisayo zisekwe kwifilosofi yokutya oko sikudingayo ngokusekwe kwiiparameter kunye neemfuno zethu, sihambisa ngezongezo kunye neemveliso ezingasempilweni njengoko iimveliso ezinkulu ngamanye amaxesha zisithengisa. Imalunga nokulungisa iiresiphi ngokufaka ezinye endaweni yazo ezinye izinto ezingcono (iswekile yeswekile esempilweni enje nge-stevia okanye iinkozo ezipheleleyo endaweni yezo zisulungekileyo) Kancinci kancinci uza kuyibona.
Iimpawu ezintle zeGonzalez
Umdla wokupheka kunye nobizo. Ukusukela oko ndaqala ukusebenzisa iThermomix kwiminyaka emininzi eyadlulayo besingazahlukani ngokupheleleyo ekhitshini ... kwaye iminyaka emininzi izayo! KwiThermorecetas ndipapasha ezona ndlela zam zokupheka zibalaseleyo zokunceda bonke abantu abaqala ekhitshini ukuba bafumane ezona zilungileyo kubo bonke. Ngaba siyafunda?